Rifeensa Gogaa Oromoo Irraa Haaduun Itti Fufe
Date: March 13, 2015Author: Oromedia 0 Comments
(Oromedia, Buusaa, 13 Bitootess 2014) Dargaggoon Oromoo gaaffii mirgaa gaafate reebame; rifeensi isaas gogaatti haadame.
Gabaasana keenya akak ijaan argitoota wabeeffatee ibsetti, dargaggoo Galataa (Tamasgeen) Waaqoo qabamee kan hidhame Bitootessa 11, bara 2015 ture.
Dargagoon kun kan hidhame Godina Shaggar Kibba Lixaa ona Daawoo magaala Buusaa keessatti sababa “gaaffii mirgaa kaftan,” jedhuun ta’uun beekameera.
Akka namooti ijaan argan nuuf himanitti dargaggoon kun poolisootaa fi kaabinootaan ari’amee erga qabamee booda sadafii qawween garmalee tumameera.
“Poolisoonnii fi dabballoonni Wayyaanee qabanii erga lafa irra harkisuun reebicha humnaa ol irraan gahanii booda fuudhanii gara mana hidhaa aanichaatti geessan,” kan jedhan jiraataan magaalaa Buusaa maqaan isaanii akka hin himamne barbaadan tokko, dargagoon kun erga hidhamee booda illee akka gidiraan guddaa irra gahe dhagayuu isanii dubbatan.
Kana malees Dargaggoo Galataa Bitootessa 11, 2015 erga reebanii hidhanii booda rifeensa gogaa irraa haadun fi mana kophaatti galchuun harkaa fi miilla muka dhaabbatutti hidhuun reeba kan jiran taúu Oduun Qeerroo Bilisummaa addeesse jira.
Akka madda Oduu kanaatti dargagoon kun erga hidhamee haga amma hidhan irraa hin hiikkamne.
Daraggoon kun erga hidhamee kaasee maatiis taée abukaatoo seeraa argatee akka hin jirre illee beekameera.
Oromoon erga garbummaa jalatti kufanii kaasanii, yeroo addaddaatti waan mirga isaaniif falmaniif rifeensa gogaa irraa haadamaa turan.
Bara 1990moota keessas Artistiin Oromoo beekamtuu, Ilfinash Qannoo, waan mirga saba ishiitiif sirbitee fi mormiteef rifeensa ishii gogaa isaa haadamte.
Previous Previous post: Namoonni 20n Balaa Konkolaataan Dhuman
Next Next post: Irreechaan Arfaasaa Dhorkame